ေဇာ်ဂျီ input နဲ့ ေဇာ်ဂျီ/ဧရာ output သံုးချင်တဲ့ ဘေလာ်ဂါ - Club Q&A /g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); });
ေဇာ်ဂျီ input နဲ့ ေဇာ်ဂျီ/ဧရာ output သံုးချင်တဲ့ ဘေလာ်ဂါ
ကျေနာ် ဘေလာ့ဂ်တစ်ခုကို လူအများနဲ့ စုေပါင်းြပီး ေရးေနပါတယ်။ အများစုက ေဇာ်ဂျီယူဇာေတွြဖစ်ြကလို့ သူတို့အလိုအတိုင်း ဘေလာ့ဂ်ကို ေဇာ်ဂျီနဲ့ အသံုးြပုေနရပါတယ်။​ ​ေဇာ်ဂျီကိုပဲ အများစု သေဘာတူေနြကတာက လူမှုကွန်ယက်ဆိုဒ်ေတွ၊ အီးေမလ်ေတွမှာ ကိုယ့်ဘေလာ့ပါ ေဒတာအေြကာင်းအရာ​များကို ပရိတ်သတ်ေတွက ြပန်လည် ြဖန့်ေ၀တဲ့အခါ ေဇာ်ဂျီသံုးေနြကသူ​ကများေန​ေတာ့ အြခားယူနီကုတ်ေတွသုံးခဲ့ရင် အဆင်မေြပတာ​ေတွြဖစ်တတ်လို့ပါ။ တင်ေပးေနတဲ့ စာေရးသူ​ အများစုကလဲ ေဇာ်ဂျီသမားေတွပဲ​ ြဖစ်ေနတာေြကာင့် အြခားယူနီကုတ် ေြပာင်းသံုးြပီး တင်ေပးဖို့ တိုက်တွန်းတာကို လက်မခံြကဘူး ြဖစ်ေနပါတယ်။ ကျေနာ့်အေန့နဲ့ကေတာ့ ဧရာယူနီကုတ်နဲ့သံုးဖို့ အရမ်း စိတ်၀င်စားမိပါတယ်။ ဧရာသံုးြခင်းြဖင့် အိုင်တီပစ္စည်းေတာ်ေတာ်များများမှာ အဆင်ေြပေနတာကို ေတွ့ရလို့ပါ။​​ ဒါေပမဲ့ သူတို့ေြပာသလို ဧရာယူနီကုတ်နဲ့ အသံုးြပုခဲ့မယ်ဆိုရင် ေဇာ်ဂျီနဲ့အသံုးများေနတဲ့ လူမှုကွန်ယက်အသိုင်းအ၀ိုင်းြကားမှာ​ ြဖန့်ေ၀ြကတဲ့အခါ စာလံုးေတွမရှင်းလင်းတဲ့အခါ စိတ်၀င်စား အားေပးမှုေတွ နည်းသွားမှာ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဒါေြကာင့် ေဇာ်ဂျီနဲ့ ပို့စ်တင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လူမှုကွန်ယက်ေတွမှာ ြပန်ရှဲတဲ့အခါ ေဇာ်ဂျီေဖာင့်အတိုင်း ြမင်ရြပီး ဘေလာ့ဂ်ေပါ်မှာေတာ့ ဧရာအတိုင်း ြမင်ေနရနိုင်ေအာင် နည်းလမ်းရှိမယ်လို့ ေတွးမိတာေြကာင့် ေဇာ်ဂျီနဲ့ ပို့စ်ေတွကို တင်ေပးြပီး ြကည့်သူေတွကိုေတာ့ ဧရာနဲ့ ြမင်ရနိုင်ေအာင် ဧရာအဖွဲ့က ကူညီေပးနိုင်ပါလား?
asked Aug 29, 2012 by fmjihjytotvz (170 points)
ဟုတ်ကဲ့။ wordpress ဆိုရင် Ayarwebkit ဆိုတာရှိပါတယ်။ အလွယ်တကူ ေြပာင်းလဲနိုင်ေအာင်စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်။ ဘေလာ်ဂါ blogger အတွက်ဆိုတရင်ေတာ့ ကုဒ်ေတွထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲတာသိမယ်ဆိုရင် ကျွန်ေတာ်တို့ရှင်းြပေပးလို့ရနိုင်ပါတယ်။
answered Aug 29, 2012 by acwpadmin (3,230 points)
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဘေလာ်ဂါသံုးထားပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ပရိုဂရမ်းမင်းအေြကာင်းကို အရမ်းြကီး နားမလည်ြကပါဘူး။ ကျေနာ်တို့ရဲ့ တမ်းပလိတ်ကို ပို့ေပးပါက ြပင်ဆင်ေပးပါသလား?
commented Aug 29, 2012 by fmjihjytotvz (170 points)
commented Aug 29, 2012 by acwpadmin (3,230 points)
ဟုတ်ကဲ့။ ေကျးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ တမ်းပလိတ်ကို ေပးပို့ရမည့် လိပ်စာေလး ေကျးဇူးြပုြပီး ေပးပါ။